Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny iOS 13.7 | Vaovao IPhone
Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny iOS 13.7
Rehefa manavao ny rafitra fiasan'izy ireo i Apple, mandritra ny fotoana fohy, mamela ny mpampiasa hidina, hiverina amin'ny kinova taloha, fotoana napetraka ao anatin'ny roa herinandro eo ho eo, na dia indraindray aza dia ahena herinandro na andro maromaro mihitsy aza.
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 14, avy amin'ny Apple nanidy varavarana fotsiny izy ireo mba hahafahana miverina amin'ny iOS 13.7, ny kinova farany navoakan'i Apple ho an'ny fitaovana tantanan'ny iOS sy iPadOS, ka raha manana olana amin'ny iOS 14 ianao dia tsy afaka miverina.
Ny fiasa sy ny fahombiazan'ny iOS 14 dia naseho hatramin'ny betas voalohany, maharena tsara (Afa-tsy ireo betaha sasany izay nanolotra fanjifana batterie be), noho izany tsy mahagaga raha nanapa-kevitra i Apple fa hanafoana ny fahafaha-midina aloha kokoa noho ny mahazatra, satria matetika ny herinandro dia matetika herinandro.
Ny isa voalohany mifandraika amin'ny Fananganana iOS 14 tondroy izay mandeha haingana Efa androany, fitaovana 1 amin'ny 4 mifanentana (ireo mitovy amin'ny iOS 13) ihany no efa nametraka ny iOS 14, izay 10% noho ny isa ampiasain'ny iOS 13 ao anatin'ny fe-potoana mitovy.
Ny miverina amin'ny kinova iOS taloha dia matetika no fomba mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay miaina tsy fahombiazana amin'ny fitaovany. Rehefa tsy misy intsony io fahafaha-manao io, ny hany safidy sisa tavela dia ny famerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana avy hatrany ary manao fametrahana madio ny kinova farany misy amin'izao fotoana izao nefa tsy mamerina ny backup mety ho notehirizintsika, satria hotaritarintsika ireo olana. izay efa niainantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 13 » Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny iOS 13.7
Salama farany ity dia hoy izy:
Fitsapana farany ity
Valiny hoarahaba fa farany ity
Fitsapana hevitra momba ny lahatsoratra
Valio i Jhon doe
IFixit dia nanala ilay Apple Watch Series 6 vaovao